‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सरकारका एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्’ | Chhinchhin Khabar
३१ श्रावण २०७७, शनिबार १८:२७
दलबहादुर बस्नेत (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत), राप्ती सोनारी गाउँपालिका, अगैया, बाँके, प्रदेश ५, नेपाल ।
चालू आर्थिक वर्षमा के कस्ता काम भए् ?
धन्यवाद प्रश्नका लागि । राप्तीसोनारी गाउँपालिका आफैंमा समृद्ध छ । प्राकृतिक श्रोत साधनले भरिपूर्ण भएकोले हामीले समृद्ध बनाउन त्यति धेरै मेहेनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हामीले समृद्ध राप्तीसोनारी निर्माणका लागि सबै वडाहरूमा विकास लागि पक्की सडक, विद्यालयका भवन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, नभएको वडामा तत्काल निर्माण गर्ने, राप्तीसोनारी कृषि पकेट क्षेत्र भएकोले कृषिलाई व्यवस्थित गरी सिँचाइका लागि अनुदान दिने काम भइरहेको छ । यहाँ विपद् जोखिम रहेको र त्यसमा बाढीको जोखिम धेरै भएको हुँदा सेल्टर निर्माण, सुरक्षाका संयन्त्र निर्माण, राहत खरिद गरेर स्टक राख्ने काम भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विकासका खम्बा हुन्, विकासका लागि कसरी हातेमालो गर्नुभएको छ ?
कर्मचारी जनप्रतिनिधि सरकारको एक रथका दुई पांग्रा जस्तै हो । एक रथ जनप्रतिनिधि र एक रथ कर्मचारी हुन् । यी दुई बीचमा नङ र मासु सरह सम्बन्ध हुनुपर्छ । राप्ती सोनारीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ । सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गर्नुभएको छ । काममा हस्तक्षेप छैन । राप्ती सोनारीको विकास र समृद्धमा सँगसँगै छौं ।
वडाको विकास, कार्यक्रम र योजना बाँडफाँड, खर्च र भुक्तानी सहज छ त ?
गाउँपालिकाबासी नागरिकका लागि कर्मचारी अहोरात्र खटिएका छांै । जनताको कामबिना ढिलासुस्ती भइरहेका छन् । नियम, प्रक्रिया र कानुन संगत आएका कुनै पनि काम रोकिँदैन । सहज रूपमा आएका साना ठूला कामको भुक्तानीहरू निश्चित विधि पु¥याएर गरेका छौं । सबैलाई हामी जानकारी गराउँछौं कि कुनै पनि काम र भुक्तानीमा झन्झट हुँदैन । कुनै समस्या आएमा वा भएमा कार्यकारी प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाअध्यक्षलाई जानकारी दिएमा हामी समाधान गर्न प्रयास गर्ने छौं ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुख्य कार्यहरू के–के भए र सम्पन्न गर्न बाँकी काम के–के छन् ?
म राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख भएर भर्खरै आएको हुँ । यहाँ कतिपय काम सुरु नभका र कतिपय भइरहेका छन् । म आउनबित्तिकै रोकिएका बाँकी काम थालेका छौं । अहिले २५ वटा योजना टेण्डर भई काम हुँदैछन् । उपभोक्ता समितिका काम भइरहेका छन् । बाँकी १७ वटा ठेक्का प्रक्रियामा गएर लकडाउनले खोल्न सकिएको छैन म्याद थप भएका छन् । लकडाउन खुलेमा ठेक्का खोलेर काम हुन्छ । तत्काल १० वटा योजनाको ठेक्का खोल्दछौं । जेठ र असार महिनाभर विकासका काम गर्न सकेमा हामी यो वर्षका अधिकांश योजनाको काम गरेर सक्छौं ।
कोरोना भाइरससँग लड्न गरेका कार्यक्रम र योजनाहरू के के हुन् ?
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि यसको प्रकृति, अवस्था र जोखिम हरेर काम गरेका छौं । खास गरेर हामीले व्यक्तिको आवगमन रोकेका छौं । हरेक वडामा बाहिरी मुलुकबाट आएका गाउँपालिकावासीको अभिलेख राख्ने, पहिचान गर्ने, स्वयम्सेवक परिचालन गरेका छौं । संकास्पद व्यक्तिलाई काउन्सिल, परामर्श गर्ने र खोजतलास भएको छ । बाहिरीबाट आएका व्यक्तिका लागि वडाहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौं । जहाँ राखेका शंकास्पद व्यक्ति १४ दिनसम्म बसेर घरमा फर्किएका छन् । त्यसै गरेर स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक उपकरण पिपिइ र अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरेका छौं । औषधी पर्याप्त खरिद गरेर राखेका छौं । वडामा मास्क वितरण भएको छ । सचेतनाका कार्यक्रम संचार माध्यमबाट र माइकिङमार्फत् भएको छ । अर्कोचाहीँ लकडाउनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न साँझ बिहान छाक टार्न मुस्किल हुने, दैनिक काम गरेर खाने मजदुर, असाहयका लागि घरमै गएर राहातको व्यवस्था गरेका छौं । गाउँपालिकाभित्र कुनै नागरिक भोकै रहनु पर्दैन् र सबै घरको लागि नुनु, तेल र साबुन हरेक घरधुरीमा व्यवस्था गरेका छौं । मुख्य सीमा नाका दाङ प्रवेश नाकामा हेल्प डेस्क राखेका छौं । त्यसैगरेर अन्य थुप्रै काममा जनचेतनामा कर्मचारी, स्वयम्सेवक, आमा समूह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी खटिएका छौं । मापदण्डका आधारमा एक हप्ताका लागि ४ वटा प्याकेज बनाएका छांै परिवारको संख्या हेरेर । जसरी लकडाउन बढ्छ त्यहीँ अनुसार राहत दिने नीति अवलम्बन गरेका छौं । राहत वडामार्फत् एकद्वारा प्रणालीमार्फत् वितरण भएको छ । विद्यार्थीका लागि लकडाउनमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम भइरहेको छ । कृषिका लागि तत्काल कृषि प्याकेज ल्याउने भन्ने गृहकार्य भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कोरोना रोक्न विपत व्यवस्थापन कोषमा २ करोड रकम गाउँ सभाले राख्ने निर्णय गरे अनुसार जम्मा भएको र ६५ लाख खर्च भएर एक करोड ३५ लाख कोषमा रहेको छ । राहत वितरण गर्न प्रदेश सभाबाट १० लाख र अन्य संघसंस्थाबाट १२ लाखसम्म रकम जम्मा भएको छ ।
यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थापन र संकलन कसरी भइरहेको छ ?
जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो श्रोतमा नदीजन्य पदार्थ भएको गाउँपालिका हो यो । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ४ पटकसम्म ठेक्का लाग्न नसकेपछि जनमतका रूपमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको छ । लकडाउन भएकोले अहिले काम भइरहेको छैन । बर्षातमा उठाउन पाइँदैन । लकडाउनपछि नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण र उत्खनन सुरु हुने छ । हामीले अहिले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकारको प्रचलित प्रदेश कानुन, मापदण्ड र दररेटमा यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक श्रोतसाधन उत्खनन र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
अन्त्यमा, गाउँपालिकाका विषयगत शाखाका कार्य र प्रगति कस्तो रहेको छ ?
विषयगत शाखाको कार्य प्रगति अहिलेसम्म सन्तोषजनक नै छ । काम राम्रो र अपेक्षा अनुसार भएका छन् । हालको लकडाउनले सबै काम हुन नसेकेको र काम ठप्प छन् । स्वास्थ्यको बाहेक अन्य शाखाका काम हुन सकेको छैन । समग्रमा आआफ्नो विषयगत शाखाबाट हुने कामहरू सन्तोषजनक रूपमा रहेका छन् । कर्मचारीहरू विषयगत शाखामा कमी छ । कतिपय कर्मचारी आउन बाँकी छ । हामी आन्तरिक रूपमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैछौं । (साभारः समृद्ध राप्तीसोनारी)
Previous articleयो राप्ती सोनारी
Next article४६८ थपिए, नेपालमा २६०१९ संक्रमित
राप्तीसोनारीले दियो बाघ आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई किरिया खर्च
राप्तीसोनारी खेलाडीका नयाँ प्रतिभाहरुको उर्वर भूमि होः अध्यक्ष थारु
राप्तीसोनारीमा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सुरु
गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले भने,‘पर्वको नाममा लागूऔषध दुर्व्यसनमा नफसौं’
जिल्ला लिग फुटबलमा जय किसन र युनाइटेड विजयी
चैत १५ देखि कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन नगर्न आग्रह
ओलम्पिक मेडलिष्टलाई २ करोड रुपैयाँ
धनलक्ष्मीले हेलिकप्टरमा जन्माइन् बच्चा
कता हरायो नरभक्षी बाघ ?
नेपालगन्ज– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५(५ रूपैयाँका दरले बढाएको...
नेपालगन्ज– राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा केही महिना यता आतंक मच्चाइरहेको पाटे बाघ नियन्त्रणमा आएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले सहयोग र समन्वय गर्ने सम्बन्धित...
नेपालगन्ज– नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले निकास दिन नसक्ने दोहो¥याए । प्रेस चौतारीले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार...
नेपालगन्ज– नेपाली कांग्रेस बाँकेको नयाँ नेतृत्व चुन्न भएको मतगणनामा कुनै पनि उम्मेदवारहरुले ५० प्रतिशत बढी मत ल्याउन नसकेपछि शुक्रबार पुनः मतदान हुने भएको छ...
नेपालगन्ज– बाँके जिल्ला लिग फुटबलमा न्यु डाँफे र जय किसान स्पोर्टस क्लबले जित हासिल गरेका छन । बिहीबार नेपालगन्ज रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा न्यु डाँफेले...
धादिङमा ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु एक घाइते
नरैनापुरका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमणः स्वास्थ्य सेवाबाहेक सबै ठप्प
‘नेपालगन्ज युथ टि–ट्वान्टी क्रिकेट’ सुरु